निचोरेर फालेका कागतीकाे खोस्टाका यस्ता अनौठा फाईदा, जान्नुहोस् - GyanBigyan
Up Next स्वास्थ्य जीवन कुकुर पाल्दा, पढ्नै पर्ने लेख !
एजेन्सी । तपाई टाउको दुख्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ रु सामान्य खालको दुखाइ हो भनेर तपाईले वेवास्ता गरिरहनु भएको छ भने…
मे’हेन्दीमा मि’साउनुहोस् यो चि’ज, कपा’ल हुनेछ गाँढा,बा’क्लो र सिल्की
ह’रेक मानिसमा आफु राम्रो र सु’न्दर देखिने चाहाना हुन्छ । त्यसैले मानिस बिभिन्न सौ’न्दर्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने र सुन्दरतामा ध्या’न…
बिहानको खाजा खाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु !
ब्रेकफास्ट अर्थात बिहानको खाजा तपाइको शरीरको लागि महत्वपुर्ण मानिन्छ। तपाइलाइ यो थाह नहोला कि बिहान को ब्रेकफास्ट छुटायो भने तपाइको…
9 months ago 649 Views
अनुहार फुस्रो हुने, चाया आउने, फुट्नेजस्ता समस्याले आम व्यक्तिलाई सताउने गर्छ । यस्तो समस्याको सिकार महिला तथा पुरुष दुवै हुने…
ब्लड प्रेसर लो भएमा के गर्ने ? यी ६ उपाय अपनाउनुहोस्
उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ। रक्तचाप न्यून भएका बिरामीलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक…
अ’नुहारको चा’उरीपन हटाउन चाहानुहु’न्छ ? दि’नहुँ प्रयोगमा ल्याउनुहो’स् यी चि’ज !
अ’नुहार र घाँटीमा चाउरी पर्दै जान थालेपछि बुढ्यौलीले छोप्यो भन्ने चिन्ता धेरैलाई हुने गर्छ । चाउरी घटाएर बुढ्यौलीलाई पर धकेल्ने…